Mijery any amin’ny mandrakizay
“Miandrandrà, ka asandrato ny lohanareo; fa manakaiky ny fanavotana anareo”. Lio. 21:28
Raha hitafy ny akanjom-pahamarinan’i Kristy ny fiangonana ka miala amin’izayrehetra mety ho fiaraisana amin’izao tontolo izao, dia misy andro mamirapiratra sy be voninahitra miposaka eo anoloany. Hitoetra mandrakizay ny teny fikasan’Andriamanitra ho azy (...). Ny fahamarinana izay tsy nahoan’ireo izay nanao tsinontsinona sy nandà azy dia handresy. Na dia amin’ny fotoana toa mitaredretra aza dia tsy mbola natsahatra mihitsy ny fandrosoany. Amin’ny hery avy any ambony no andehanany mamakivaky manapaka ireo fefy mafy indrindra ary mandresy ny sakantsakana rehetra.
Inona no nampahery ilay Zanak’Andriamanitra nandritra ny fiainany feno asa mafy sy fanoloran-tena? Hitany ny vokatry ny fisasaran’ny fanahiny ary nahafa-po Azy izany. Nijery tany amin’ny mandrakizay Izy ary nibanjina ny fahasambaran’ireo izay nahazo famelan-keloka sy fiainana mandrakizay noho ny fietreny. Ren’ny sofiny ny antso-antson’ireo voavonjy. Henony mihira ny hiran’i Mosesy sy ny Zanak’Ondry ireo izay voaavotra.
Mety manana vina momba ny hoavy isika, momba ny fahamendrehan’ny lanitra. Voambara ao amin’ny Baiboly ireo vina momba ny voninahitra ho avy, endri-javatra voasoritry ny tanan’Andriamanitra, ary sarobidy indrindra amin’ny fiangonany ireo. Afaka mitsangana eo an-tokonan’ilay tanàna mandrakizay isika amin’ny alalan’ny finoana, ary mandre ny fiarahabana feno fitiavana atolotra ho an’ireo izay miara-miasa amin’i Kristy eto amin’ity fiainana ity, ka raisiny ho voninahitra ho azy ny fitondrana fahoriana noho ny aminy. Ao anatin’ny filazana ireto teny ireto hoe: “Avia hianareo izay notahin’ny Raiko”, dia atsipin’izy ireo eo an-tongotr’Ilay Mpanavotra ny satro-boninahiny, sady mihoraka izy ireo hoe: “Ny Zanak’ondry, Izay novonoina, dia miendrika handray hery sy harena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary saotra (...). Ho an’ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandianana sy ho an’ny Zanak’ondry anie ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay” Mat. 25:34, Apok. 5:12,13
Any ireo voaavotra no miarahaba ireo izay nitondra azy ho eo amin’ny Mpamonjy, ary miara-midera Azy ny rehetra, Izy Izay maty ka afaka ny hanana fiainana mifamatra amin’ny fiainan’Andriamanitra ny taranak’olombelona. Vita hatreo ny ady. Mifarana ny fahoriana sy ny fifandrafiana. Hiram-pandresena no mameno ny lanitra manontolo raha indro ny voaavotra fa manandra-peo miredona amim-pifaliana hoe: Mendrika, mendrika ny Zanak’Ondry izay novonoina , fa velona indray, Ilay mpiady mahery.